उर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने ! – NepalajaMedia
उर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने !
September 10, 2020 133
काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएको छ । विहीबारको मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागेका हुन् ।
जानकारी अनुसार उर्जामन्त्री पुनले विहीबार घिसिङको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुहुने र यो विषयमा सम्भवत् विहीबार नै निर्णय हुनेछ । त्यस्तै, कुलमानको म्याद थपका लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी गरिरहनुभएको बताइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएका घिसिङको म्याद यही भदौ २९ गते सकिदैछ । घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि नेपालमा लोडसेडिङ हटेको थियो ।
साथै, उनले चार वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा विद्युत चुहावटमा कमी ल्याउन सफल भएका छन्, भने घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई हाल अर्बौंको नाफा दिएका छन् । यसपटक कुलमानको म्याद दुई वर्ष थपिने सम्भावना रहेको जानकारी गराइएको छ ।
Prevनेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा भारत
Nextपाल्पामा जनप्रतिनिधिसहित २८ जना कोरोना सङक्रमित थपिए
पल शाहले कु,टपिट गरे भनेर प्रहरिमा उ,जुरी परे पछी मुख खोले पलले,के भएको रहेछ त्यो दिन (भिडियो सहित)
यस्तो हुन्छ दाँतको बीचमा खाली ठाउँ हुनेको भविष्य
नेपाली केटि अरबी केटा सँग हेर्नै नसकिने यस्तो भिडियो १८ बर्ष माथिकोले मात्रै भिडियो हेर्नुहोला
प्रधानमन्त्री ओलीबारे अपमानजनक समाचार बनाउने जी न्युजका पत्रकार सुधिर चौधरी बालुवाटारमा, ओलीकै अगाडी ‘उपरखुट्टी’
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (14499)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (8382)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7810)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6467)
ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति (5753)
भोलीबाट १० दिनसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय (5375)
एक हप्ताका लागि सरकारी/गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, पसल सबै बन्द हुने ! भर्खरै आयो यस्तो खबर ! (4765)
सपनामा के के कुर देख्नुभयो भने धन प्राप्ती हुन्छ जान्नुहोस ! (4637)
शनिबार बिहानै आयो खुसिको खबर:सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य! (4341)
टाउकोमा झलल बत्ति बालेको कोब्रा सर्प र कुकुर भेट भएपछि….(भिडियो सहित) (3617)
भ्वाइस अफ नेपालमा क्याप्टेन विजय लामा पनि , दिए यस्तो दमदार प्रस्तुति- हेर्नुहोस् (भिडि यो सहित)
चर्चीत पत्रकार सन्तोश देउवालाई यो के आइलाग्यो यस्तो ? अस्पताल’को बेड’बाट आ’यो य’स्तो ख’बर !
यी युवकले भक्तपुरको गाई फार्ममा यसरी साथीलाई खु’कु रीले टु क्रा पारे, आफ्नै आमाले छोरोलाई प्रहरीको जिम्मा लगाईन (भिडियो सहित)
‘सबैका बाबा हुन्छ हाम्रो किन बाबा छैन ममी ? भनेर दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
पानको पातले एकै रातमा खोल्नसक्छ तपाईको भाग्यको ढोका, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग